Hafatra mikasika ny fahasalaman'ny mpitandrina Rakotoharintsifa Andrianjatovo – FJKM Ambavahadimitafo Hafatra mikasika ny fahasalaman'ny mpitandrina Rakotoharintsifa Andrianjatovo |
Hafatra mikasika ny fahasalaman'ny mpitandrina Rakotoharintsifa Andrianjatovo
Publié le 08 octobre 2009 à 12:10
Iarahantsika mahalala fa tao anatin’ny volana maromaro izay dia tao anatin’ny tsy fahasalamana ny mpitandrina Rakotoharintsifa Andrianjatovo.
Mbola ao anatin’ny fikarakarana ny fahasalamana ireo mpitsabo amin’izao fotoana izao. Ka noho izany dia :
Mangataka antsika mba hitondra am-bavaka
Mangataka antsika mba hitondra am-bavaka mba hiverenan’ izany fahasalaman’ny Ray aman-dreny mpitandrina izany, mba ahazoany mirihariha miaraka amintsika indray eto amin’izao fiangonana izao
Mila filaminana tanteraka ny mpitandrina
Mety mbola haharitra iray na roa volana ny fitsaboana ka mila filaminana tanteraka ny mpitandrina araky ny filazan’ny mpitsabo. Ka noho izany dia tsy afaka handray antsika ny mpitandrina mandritra izay volana iray na roa izay aloha.
Tsy atao tompon-trano mihony isika mianakavy ry havana ka miangavy antsika mba haharitra amin’izany fitsaboana izany.
Misy ary noho izany ny fandaminana eo amin’ny fampandehanana ny raharaham-piangonana.	Raha misy raharaha tokony hoentina eto amin’ny fiangonana dia isaky ny Alarobia dia efa vonona handray antsika ny Sekreteran’ny fiangonana ao amin’ny Akany Ralibera Daniel, na mifandray amin’ny Filohan’ny Loholona sy Diakona na ny Biraom-piangonana iray manontolo
Mila fanohanana ara-bola
Efa manana teti-bola amin’ny fitsaboana ny Ray aman-dreny mpitandrina sy ny fianakaviany isika ao amin’ny sora-bolan’ny fiangonana. Kanefa mbola mety haharitra ny fitsaboana koa dia manao antso avo ny Biraon’ny fiangonana mba hanome tànana mba ahazoana manatanteraka amin’ny tokony ho izy ny fitsaboana ny ray aman-dreny mpitandrina.
Azontsika arotsaka ao amin’ny mpitahiry volan’ny fiangonana izany eto am-piangonana isaky ny alahady, na isaky ny alarobia ao amin’ny Akany Ralibera Daniel.
Marihina fa hanomezana rosia ara-dalàna ary avoakantsika amin’ny mangarahara izany rehetra izany.
Fa ny zava-dehibe ry havana dia ny fitondrantsika am-bàvaka ny fahasalaman’ny mpitandrina Rakotoharintsifa Andrianjatovo sy ny fianakaviany manontolo na amin’ny fotoana rehetra hankahery azy ireo amin’izany fitsaboana izany.
Andriamanitra anie hanome hery antsika mba hitondrantsika am-bavaka izany ray aman-dreny izany.
Nanokana fotoana manokana nitondrana am-bavaka ny Ray aman-dreny mpitandrina ny fiangonana tamin’ny Alahady 04 Oktobra 2009 nandritra ny fotoam-pivavahana.